တစ်ကိုယ်တော်ရှိုးပွဲအကြွေးတွေဆပ်ဖို့ ကားရောင်းလိုက်ရတဲ့ ပိုပို | CeleTrend
ပရိသတ်ရဲ့အချစ်တော်ပိုပိုကတော့ ဒီနေ့မှာ သူ့ဘဝအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်စရာတစ်ခုကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ပိုပိုကတော့ သူတတ်ကျွမ်းတဲ့အဆိုပညာနဲ့ ဘဝကို တစ်ကနေ စခဲ့ရတဲ့ မိဘမဲ့တစ်ယောက်ပါ။ အားပေးသူပရိသတ်တွေကြောင့်လည်း သူရရှိခဲ့တဲ့ အနုပညာကြေးတွေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်အိမ်၊ကားနဲ့ လူတန်းစေ့နေနိုင်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုကတော့ မကြာသေးခင်က မန္တလေးမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ပထမဆုံးတစ်ကိုယ်တော်ရှိုးပွဲမှာ အရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင် အများကြီးမျှော်လင့်ပြီး ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် Covid-19 ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးကြောင့် လူဝင်နည်းခဲ့ပြီး အရှုံးပေါ်ခဲ့ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ… ဒီနေ့မှာတော့ ဒီရှိုးပွဲရဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကို သူချစ်တဲ့ကားလေးကို ရောင်းပြီးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း စိတ်မကောင်းစွာ မျှဝေခဲ့ပါတယ်။
“ဒီနေ့ သူမ ဟာ တကယ်ပဲ ထားသွားခဲ့ပြီ… သူမ ကို ကိုယ်က ထွက်သွားခွင့်ပြုလိုက်တာ… ပထမဆုံး ဝယ်ဖူးတဲ့ ကားလေး ဂျပန် ကနေ ရောက်ကတည်းက ကိုယ့်ကို စိတ်ဒုက္ခ မပေးဖူးဘူး…ညဉ် ကောင်းတဲ့ သူမ အခုတော့ သူမနဲ့ ကိုယ် တကယ် ဝေးခဲ့လေပြီ… လွမ်းနေမယ် နော်…. ကိုယ် လုပ်ချင်တဲ့ One Lady Show အတွက် သူပေးဆပ်ခဲ့တယ်…. Show ပွဲ ပေါင်းများစွာ ကို အန္တရာယ် ကင်းကင်းနဲ့ခေါ်ဆောင်ပေးခဲ့ဘူးတယ်…. မင်းက ငါ့အတွက် ကားတစ်စီးဆိုတာထက် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လိုပါ ပဲ…. ဒီနေ့ စိတ်တော်တော် မကောင်းဘူး (၅) နှစ် နီးပါး သံယောဇဉ်” လို့ စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ အရှုံးတွေပြီးရင် ကံကောင်းခြင်းတွေပြန်လာဦးမှာပါ ပိုပိုရေ… ပိုပိုကို အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးလည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ ပိုပိုအတွက် အားပေးစကားလေး ပြောခဲ့ပါဦးနော်။
ပရိသတျရဲ့အခဈြတျောပိုပိုကတော့ ဒီနမှေ့ာ သူ့ဘဝအတှကျ စိတျမကောငျးဖွဈစရာတဈခုကို မြှဝခေဲ့ပါတယျ။ ပိုပိုကတော့ သူတတျကြှမျးတဲ့အဆိုပညာနဲ့ ဘဝကို တဈကနေ စခဲ့ရတဲ့ မိဘမဲ့တဈယောကျပါ။ အားပေးသူပရိသတျတှကွေောငျ့လညျး သူရရှိခဲ့တဲ့ အနုပညာကွေးတှနေဲ့ ကိုယျပိုငျအိမျ၊ကားနဲ့ လူတနျးစနေ့နေိုငျလာခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ စိတျမကောငျးစရာတဈခုကတော့ မကွာသေးခငျက မန်တလေးမွို့မှာကငျြးပခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ပထမဆုံးတဈကိုယျတျောရှိုးပှဲမှာ အရှုံးတှနေဲ့ရငျဆိုငျခဲ့ရပါတယျ။ သူကိုယျတိုငျ အမြားကွီးမြှျောလငျ့ပွီး ကွိုးစားခဲ့ပမေယျ့ Covid-19 ကပျရောဂါဆိုးကွီးကွောငျ့ လူဝငျနညျးခဲ့ပွီး အရှုံးပျေါခဲ့ပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ… ဒီနမှေ့ာတော့ ဒီရှိုးပှဲရဲ့ဆုံးရှုံးမှုတှကေို သူခဈြတဲ့ကားလေးကို ရောငျးပွီးဆပျခဲ့ပွီဖွဈကွောငျး စိတျမကောငျးစှာ မြှဝခေဲ့ပါတယျ။
“ဒီနေ့ သူမ ဟာ တကယျပဲ ထားသှားခဲ့ပွီ… သူမ ကို ကိုယျက ထှကျသှားခှငျ့ပွုလိုကျတာ… ပထမဆုံး ဝယျဖူးတဲ့ ကားလေး ဂပြနျ ကနေ ရောကျကတညျးက ကိုယျ့ကို စိတျဒုက်ခ မပေးဖူးဘူး…ညဉျ ကောငျးတဲ့ သူမ အခုတော့ သူမနဲ့ ကိုယျ တကယျ ဝေးခဲ့လပွေီ… လှမျးနမေယျ နျော…. ကိုယျ လုပျခငျြတဲ့ One Lady Show အတှကျ သူပေးဆပျခဲ့တယျ…. Show ပှဲ ပေါငျးမြားစှာ ကို အန်တရာယျ ကငျးကငျးနဲ့ချေါဆောငျပေးခဲ့ဘူးတယျ…. မငျးက ငါ့အတှကျ ကားတဈစီးဆိုတာထကျ သူငယျခငျြးတဈယောကျလိုပါ ပဲ…. ဒီနေ့ စိတျတျောတျော မကောငျးဘူး (၅) နှဈ နီးပါး သံယောဇဉျ” လို့ စိတျမကောငျးစှာနဲ့ မြှဝခေဲ့ပါတယျ။ အရှုံးတှပွေီးရငျ ကံကောငျးခွငျးတှပွေနျလာဦးမှာပါ ပိုပိုရေ… ပိုပိုကို အားပေးနတေဲ့ပရိသတျကွီးလညျး စိတျမကောငျးဖွဈနတေဲ့ ပိုပိုအတှကျ အားပေးစကားလေး ပွောခဲ့ပါဦးနျော။